Fanapahan-kevitry ny sIP
Vaky ny MSP430 MCU
SPMC65 SPMC75 Fanapahan-kevitra
Vaky ny CYPRESS / CY8C MCU
Fanapahan-kevitry ny DSP CHIP
Vaky ny ARM MCU
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD dia natsangana tamin'ny taona 2000. Miasa haingana amin'ny 1-32 sosona PCB izahay, ny fikojakojana sy ny fampivelarana ny kojakoja ara-pitsaboana rehetra, ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny fitaovan'ny fifandraisana amin'ny finday. Izahay dia iray amin'ireo orinasa matanjaka sy manan-kery indrindra amin'ireo orinasa toy ny serivisy fijanonana tokana amin'ny fivorian'ny PCB, kopia PCB, clone PCB, famotehana IC, famolavolana PCB, decryption IC, famolavolana chip, famolavolana SMT, famokarana PCB, famokarana prototype ary debugging…
Manome prototype fihodinana haingana izahay, fivoriambe PCB avo lenta ary famokarana miaraka amin'ny haavo ambony (SMT), ny lavaka (THT) ary ny singa mifangaro. Manolotra fanalahidy mihodina izahay (alefaso fotsiny aminay ny rakitra Gerber sy BOM), ny entana (omenao ny faritra rehetra) ary ny safidy isan-karazany amin'ny fividianana singa hanampiana anao hampihena ny fotoana lany sy fiandrasana. Ny serivisy prototyping fihodinana haingana dia afaka manangona ny takelakao ao anatin'ny 24 ora. Azontsika atao ny mitantana habetsaky ny habetsahana ary koa ny famokarana boky. Ny serivisinay rehetra dia amin'ny vidin'ny fifaninanana ary miaraka amin'ny antoka mahafa-po 100%…
Mamaha ny vaky IC MCU mahazatra
Fanapahan-kevitry ny CHIP NXP
Vaky SIP SST
VAKAVY CHIP XILINX
VAKAVY INTEL CHIP
Vaky ny CHIP ACTEL_RTAX
Vaky tampoka ny SonIX MCU
Vaky ny TI_TMS IC
Vaky ny ATMEL MCU
Fanesorana kaody Chip >>
Shenzhen Sichi Technology Co., LTD dia manana injeniera rindrambaiko sy fikirakirana maherin'ny 100 amin'ny manam-pahaizana manam-pahaizana momba ny decryption puce, IC Crack, MCU unlock, IC reverse analysis / ASM Code, chip burnish ary ny famantarana ny maodely, ny klone PCB ary ny famokarana betsaka. Manana tombony sy taham-pahombiazana mahavariana izahay, mahay fitaovana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana, fitaovana fanaraha-maso indostrialy, tabilao lalao sns. Ny traikefa manan-karena amin'ny famoahana ny chip, ny kalitao ary ny vidiny dia azo antoka. Azontsika atao ny manome ny fanohanana ara-teknika elektronika mifandraika amin'izany mamela ny mpanjifa hanome toky fa manao vokatra tsara. Izahay dia mizaha hatrany ny hafa tsy afaka mahatratra ny sehatry ny haitao, ary manatsara hatrany ireo toetrantsika amin'ny serivisy mba hanampiana olona maro hahatakatra ny nofinofin'izy ireo ao anatin'ny fotoana fohy…
Raha manana tetikady na sary ianao, nefa tsy manam-potoana na fitaovana hamita ny endriny, afaka manampy anao izahay. Misy dingana 11 amin'ny fizotry ny famolavolana PCB & ny fikorianan'ny asa izay fonosinay ao amin'ilay torolàlana momba ny famolavolana pcb. Dingana1: hamarano ny endrika famolavolana anao. Step2: misafidy rindrambaiko PCB Design. Step3: sambory ny scématique anao. Step4: Design Component Footprints - Raha vantany vao feno ny skemazy hanoritana ny drafitra ara-batana an'ny singa tsirairay. Ireto drafitra ireto no apetraka eo amin'ny pcb amin'ny varahina mba hametahana ireo singa ao anaty tabilao vita pirinty…
Fanamboarana PCB >>
Hainay tsara ny mamantatra ireo sombin-tsolika sarotra, 1-32 sosona PCB clone, layout PCB, PCB Assembly ary famokarana betsaka. Mifantoka amin'ny famokarana PCBA avo lenta izahay, ary ho an'ny famokarana betsaka dia hanolotra fihenam-bidy. Ny PCBA rehetra dia manana fe-potoana fiantohana iray taona. Raha manana PCB hafa ambonin'ireo sosona 6 ianao, toy ny sosona 8, sosona 10, sosona 16, sosona 18, sosona 28, azafady mifandraisa aminay, mahay mandika sy manao klone multilayer board izahay. Hainay ihany koa ny mamaky ny puce sarotra toa ny PIC16F1937, PIC16F1936, PIC16F1947, PIC24FJ64, PIC24HJ64, PIC18F25, EPM240, EPM570, EPM1270, STM, LPC, R5F, MB, NEC, MC, TMS, CY8C, AT91SAM, TMP
Hainay tsara ny mamantatra ireo sombin-tsolika sarotra, 1-32 sosona PCB clone, layout PCB, PCB Assembly ary famokarana betsaka. Mifantoka amin'ny famokarana PCBA avo lenta izahay, ary ho an'ny famokarana betsaka dia hanolotra fihenam-bidy. Ny PCBA rehetra dia manana fe-potoana fiantohana herintaona. Raha manana PCB hafa ambonin'ireo sosona 6 ianao, toy ny sosona 8, sosona 10, sosona 16, sosona 18, sosona 28, azafady mifandraisa aminay, mahay mandika sy manao klone multilayer board izahay. Hainay koa ny…
Mahay amin'ny fitaovana fitsaboana sy fahasalamana, fitaovana fanaraha-maso indostrialy ary klone lalao.
IC Crack, MCU mamaha, famakafakana miverina IC / Kaody ASM ...
IC Crack sy disassembling kaody
serivisy fijanonana tokana an'ny PCB Assembly, kopian'ny PCB, clone PCB, IC Crack, endrika PCB, decryption IC, famolavolana chip, fanodinana SMT ...
Manana tombony amin'ny vidiny manaitaitra sy tahan'ny fahombiazana izahay. Mahay amin'ny fitaovana ara-pitsaboana sy ara-pahasalamana, fitaovana fanaraha-maso indostrialy ary ny tabilao lalao ...
Izahay dia mizaha hatrany ny hafa tsy afaka mahatratra ny sehatry ny haitao, ary manatsara hatrany ireo toetrantsika amin'ny serivisy mba hanampiana olona maro hahatakatra ny nofinofin'izy ireo ao anatin'ny fotoana fohy.
Dec-08-2020 PCB Copy Engineering mampiasa tabilao misy pirinty maro sosona
Dec-07-2020 Ny fiheverana amin'ny fanoratana puce aorian'ny AVR microcontroller IC decryption
Dec-07-2020 Famerenana ny code IC sy chip
Nov-30-2020 Misy microcontrollers mahazatra, ny karazana chips
Nov-30-2020 Shenzhen Sichi Technology Co., LTD dia naorina tamin'ny 2000
Shenzhen Sichi Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2000. Izy io no orinasa matanjaka sy manan-kery indrindra miaraka amin'ireo orinasa manaraka: serivisy fiatoana an'ny PCB Assembly, kopian'ny PCB, clone PCB, IC Crack, famolavolana PCB, decryption IC, puce famolavolana mihodina, fanodinana SMT, fanamboarana PCB, famokarana prototype ary fanafoanana. Hainay haingana ny 1-38 sosona PCB, ny fikojakojana sy ny fampivelarana ny kojakoja ara-pitsaboana rehetra, ary ny fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny fitaovana fifandraisana finday.